24.07.20 Morning Nepali Murli Om Shanti BapDada Madhuban
“ मीठे बच्चे– बाबा आउनु भएको छ तिमीलाई ज्ञान रत्न दिन , बाबाले तिमीलाई जुन कुरा सुनाउनु हुन्छ वा सम्झाउनु हुन्छ त्यो ज्ञान हो । ज्ञान रत्न ज्ञान सागर सिवा ए अरू कसैले दिन सक्दैन।”
आत्माको मूल्य कम हुनाको मुख्य कारण के हो?
मूल्य कम हुन्छ मिसावट पर्नाले। जसरी सुनमा मिसावट गरेर गहना बनाउँछन् त्यसैले त्यसको मूल्य कम हुन जान्छ। त्यस्तै आत्मा जुन सच्चा सुन हो, त्यसमा जब अपवित्रताको मिसावट पर्छ तब मूल्य कम हुन जान्छ। यतिबेला तमोप्रधान आत्माको कुनै मूल्य छैन। शरीरको पनि कुनै मूल्य छैन। अहिले तिम्रो आत्मा र शरीर दुवै यादद्वारा मूल्यवान् बनिरहेका छन्।
प्यारा रूहानी बच्चाहरूलाई बाबा बसेर सम्झाउनु हुन्छ र यादका युक्तिहरू पनि बताइरहनु भएको छ। बच्चाहरू बसेका छन्, बच्चाहरूको मनमा छ शिव भोले बाबा आउनु भएको छ। मानौं आधा घण्टा शान्तिसँग बसें, बोलिनँ भने तिम्रो भित्र आत्माले भन्छ– शिव बाबाले केही बोले हुन्थ्यो। जानेका छौ– शिवबाबा विराजमान हुनुहुन्छ, तर बोल्नुहुन्न। यो पनि तिम्रो यादको यात्रा हो नि। बुद्धिमा शिवबाबा नै याद हुन्छ। मनले सम्झन्छौ– बाबाले केही बोले हुन्थ्यो, ज्ञान रत्न दिए हुन्थ्यो। बाबा आउनु हुन्छ नै तिमी बच्चाहरूलाई ज्ञान रत्न दिन। उहाँ ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ नि। भन्नुहुन्छ– प्यारा बच्चाहरू! देही-अभिमानी भएर बस। बाबालाई याद गर। यो भयो ज्ञान। बाबा भन्नुहुन्छ– यस ड्रामाको चक्रलाई, सिँढीलाई र बाबालाई याद गर– यो ज्ञान भयो। बाबाले जे सम्झाउनु हुन्छ त्यसलाई ज्ञान भनिन्छ। यादको यात्राको विषयमा पनि सम्झाइरहनु हुन्छ। यी सबै हुन् ज्ञान रत्न। यादको कुरा जे सम्झाउनु हुन्छ, यी रत्नहरू धेरै राम्रा छन्। बाबा भन्नुहुन्छ– आफ्नो ८४ जन्मलाई याद गर। तिमी पवित्र आएका थियौ फेरि पवित्र बनेर नै जानु छ। कर्मातीत अवस्थामा जानु छ र बाबाद्वारा पूरा वर्सा लिनु छ। त्यो तब पाइन्छ जब आत्मा सतोप्रधान बन्छ यादको बलबाट। यी शब्दहरू धेरै मूल्यवान् छन्, नोट गर्नुपर्छ। आत्मामा नै धारणा हुन्छ। यो शरीर त अंगहरू मिलेर बनेको हुन्छ जुन विनाश हुन्छ। राम्रो वा नराम्रो संस्कार आत्मामा भरिन्छ। बाबामा पनि संस्कार भरिएको छ– सृष्टिको आदि-मध्य-अन्त्यको ज्ञानको, त्यसैले उहाँलाई नलेजफुल भनिन्छ। बाबाले सत्य बताउनु हुन्छ– ८४ को चक्र बिल्कुलै सहज छ। अहिले ८४ को चक्र पूरा भएको छ। अब हामी फर्केर बाबाको पासमा जानु छ। मैलो आत्मा त त्यहाँ जान सक्दैन। तिम्रो आत्मा पवित्र भएपछि यो शरीर छुट्छ। पवित्र शरीर त यहाँ पाउन सकिँदैन। यो पुरानो जुत्ता हो, यसबाट वैराग्य आइरहेको छ। आत्मा पवित्र बनेर फेरि भविष्यमा हामीले पवित्र शरीर लिनु छ। सत्ययुगमा हामी आत्मा र शरीर दुवै पवित्र थियौं। अहिले तिम्रो आत्मा अपवित्र बनेको छ र शरीर पनि अपवित्र छ। जस्तो सुन त्यस्तै गहना। सरकारले पनि भन्छ हल्का सुनका गहना लगाऊ। त्यसको भाउ कम छ। अहिले तिम्रो आत्माको मूल्य पनि कम छ। त्यहाँ तिम्रो आत्माको कति मूल्य हुन्छ! सतोप्रधान हुन्छ नि। अहिले छ तमोप्रधान। मिसावट भएको छ, कुनै कामको छैन। त्यहाँ आत्मा पवित्र हुन्छ, त्यसैले मूल्य धेरै हुन्छ। अहिले ९ क्यारेटको बनेको छ त्यसैले कुनै मूल्य छैन। बाबा भन्नुहुन्छ– आत्मालाई पवित्र बनायौ भने फेरि शरीर पनि पवित्र मिल्छ। यो ज्ञान अरू कसैले दिन सक्दैन।
बाबाले नै भन्नुहुन्छ– म एकलाई याद गर। कृष्णले कसरी भन्न सक्लान्। उनी त देहधारी हुन् नि। बाबा भन्नुहुन्छ– आफूलाई आत्मा सम्झेर म पितालाई याद गर। कुनै देहधारीलाई याद नगर। अब तिमीले बुझेका छौ भने फेरि सम्झाउनु पर्छ। शिव बाबा हुनुहुन्छ निराकार, उहाँको अलौकिक जन्म हुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई पनि अलौकिक जन्म दिनुहुन्छ। अलौकिक बाबा अलौकिक बच्चा। लौकिक, पारलौकिक र अलौकिक भनिन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई अलौकिक जन्म मिल्छ। बाबाले तिमीलाई एडप्ट गरेर वर्सा दिनुहुन्छ। तिमीले जानेका छौ– हामी ब्राह्मणहरूको पनि अलौकिक जन्म हुन्छ। अलौकिक बाबाद्वारा अलौकिक वर्सा मिल्छ। ब्रह्माकुमार-ब्रह्माकुमारीहरू बाहेक अरू कोही स्वर्गको मालिक बन्न सक्दैन। मनुष्यले केही पनि बुझ्दैनन्। तिमीलाई बाबाले कति सम्झाउनु हुन्छ। आत्मा जुन अपवित्र बनेको छ, त्यो याद सिवाय अरूबाट पवित्र बन्न सक्दैन। यादमा रहेनौ भने मैला रहन्छ। पवित्र बन्न सक्दैनौ अनि सजाय खानुपर्छ। सारा दुनियाँका मनुष्य आत्माहरू पवित्र बनेर फर्केर जानु छ। शरीर त जाँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ– आफूलाई आत्मा सम्झिन कति मुश्किल हुन्छ। धन्दा आदिमा कहाँ त्यो अवस्था रहन्छ र। बाबा भन्नुहुन्छ– ठीकै छ आफूलाई आत्मा सम्झिन नसके पनि शिव बाबालाई याद गर। धन्दा आदि गर्दा यही मेहनत गर– म आत्माले यस शरीरद्वारा काम गर्छु। म आत्माले नै शिवबाबालाई याद गर्छु। आत्मा सबै भन्दा पहिला पवित्र थियो, अब फेरि पवित्र बन्नु छ। यो हो मेहनत। यसमा एकदम धेरै कमाई छ। यहाँ जतिसुकै धनवान हुन्, अरब-खरब होस् तर त्यसमा सुख छैन। सबैको शिरमा दु:ख छ। ठूला-ठूला राजाहरू, राष्ट्रपति आदि आज छन्, भोलि उनीहरूलाई मारिदिन्छन्। बेलायतमा के-के भइरहन्छ। धनवानहरूमाथि, राजाहरूमाथि त आपद् छ। यहाँ पनि जो राजाहरू थिए ती प्रजा बनेका छन्। राजाहरूमाथि फेरि प्रजाहरूको राज्य भएको छ। ड्रामामा यस्तै निश्चित छ। अन्त्यमा पनि यही हालत हुन्छ। धेरै जना आपसमा लडिरहन्छन्। तिमीले जानेका छौ– कल्प पहिला पनि यस्तै भएको थियो। तिमीले गुप्त भेषमा दिलो ज्यान र अत्यन्त प्रेमले आफ्नो गुमाएको राज्य लिन्छौ। तिमीलाई पहिचान भएको छ– हामी त मालिक थियौं, सूर्यवंशी देवता थियौं। अहिले फेरि त्यही बन्नको लागि पुरुषार्थ गरिरहेका छौं किनकि यहाँ तिमीले सत्य नारायणको कथा सुनिरहेका छौ नि। बाबाद्वारा हामी नरबाट नारायण कसरी बन्ने? बाबा आएर राजयोग सिकाउनु हुन्छ। भक्तिमार्गमा यो कसैले सिकाउन सक्दैन। कुनै पनि मनुष्यलाई बाबा, टिचर, गुरु भनिदैन। भक्तिमा कति पुराना कथाहरू सुनाउँछन्। अहिले तिमी बच्चाहरू २१ जन्म विश्राम पाउनको लागि पावन अवश्य बन्नुपर्छ।
बाबा भन्नुहुन्छ– आफूलाई आत्मा सम्झ। आधाकल्प त ड्रामा अनुसार देह-अभिमानी भएर रहन्छौ, अब देही-अभिमानी बन्नु छ। ड्रामा अनुसार अब पुरानो दुनियाँ परिवर्तन भएर नयाँ बन्छ। दुनियाँ त एउटै हो। पुरानो दुनियाँबाट फेरि नयाँ बन्छ। नयाँ दुनियाँमा नयाँ भारत थियो अनि त्यसमा देवी-देवता थिए। राजधानी पनि जानेका छौ, जमुनाको किनारमा थियो, जसलाई परिस्तान पनि भन्दथे। त्यहाँ स्वाभाविक सुन्दरता हुन्छ। आत्मा पवित्र बनेपछि पवित्र आत्मालाई शरीर पनि पवित्र मिल्छ। बाबा भन्नुहुन्छ– म आएर तिमीलाई हसीन अर्थात् देवी-देवता बनाउँछु। तिमी बच्चाहरूले आफ्नो जाँच गरिराख– म भित्र कुनै अवगुण त छैन? यादमा रहन्छु? पढाइ पनि पढ्नुपर्छ। यो हो धेरै उच्च पढाइ। एउटै पढाइ छ, त्यस पढाइमा कति किताब आदि पढ्छन्। यो पढाइ हो सबै भन्दा उच्च, पढाउने पनि हुनुहुन्छ उच्च भन्दा उच्च शिवबाबा। यस्तो होइन शिवबाबा कुनै यस दुनियाँको मालिक हुनुहुन्छ। विश्वको मालिक त तिमी बन्छौ नि। तिमीलाई कति नयाँ-नयाँ गहन कुरा सुनाइरहन्छु। मनुष्यले सम्झन्छन्– परमात्मा सृष्टिको मालिक हुनुहुन्छ। बाबाले सम्झाउनु हुन्छ– प्यारा बच्चाहरू! म यस सृष्टिको मालिक होइन। तिमी मालिक बन्छौ फेरि राज्य गुमाउँछौ। फेरि बाबा आएर विश्वको मालिक बनाउनु हुन्छ। विश्व यसलाई नै भनिन्छ। मूलवतन वा सूक्ष्मवतनको कुरा होइन। मूलवतनबाट तिमी यहाँ आएर ८४ जन्मको चक्कर लगाउँछौ। फेरि बाबा आउनु पर्छ। अहिले फेरि तिमीलाई पुरुषार्थ गराउँछु– त्यो प्रारब्ध पाउनको लागि, जुन तिमीले गुमाएका थियौ। हार र जितको खेल हो नि। यो रावण राज्य समाप्त हुन्छ। बाबाले कति सहज रीतिसँग सम्झाउनु हुन्छ। बाबा स्वयं बसेर पढाउनु हुन्छ। त्यहाँ त मनुष्यले मनुष्यलाई पढाउँछन्। हौ तिमी पनि मनुष्य तर बाबाले तिमी आत्माहरूलाई पढाउनु हुन्छ। पढाइको संस्कार आत्मामा नै रहन्छ। अहिले तिमी नलेजफुल छौ। त्यो सबै हो भक्तिमार्गको ज्ञान। ज्ञान कमाईको लागि पनि हुन्छ। शास्त्रहरूमा पनि ज्ञान छ। यो हो रूहानी ज्ञान। तिमी रुहलाई रूहानी बाबा बसेर ज्ञान सुनाउनु हुन्छ। ५ हजार वर्ष पहिला पनि तिमीले सुनेका थियौ। सारा मनुष्य सृष्टिभरमा कसैले कहिल्यै पनि यस्तो पढाउँदैन। कसैलाई पनि थाहा छैन, ईश्वरले कसरी पढाउनु हुन्छ?
तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ– अहिले यस पढाइबाट किंगडम स्थापना भइरहेको छ। जसले राम्ररी पढ्छन् र श्रीमतमा चल्छन् उनै सर्वोच्च बन्छन् र जसले बाबाको निन्दा गराउँछन्, हात छोड्छन् उनीहरूले प्रजामा धेरै सानो पद पाउँछन्। बाबाले त एउटै पढाइ पढाउनु हुन्छ। पढाइमा कति मार्जिन छ। दैवी राजधानी थियो नि। एक मात्र बाबा हुनुहुन्छ जसले यहाँ आएर राजधानी स्थापन गर्नुहुन्छ। बाँकी यो सबै विनाश भएर जान्छ। बाबा भन्नुहुन्छ– प्यारा बच्चाहरू! अब छिट्टै तयारी गर। व्यर्थमा समय खर्च नगर। याद गर्दैनौ भने धेरै मूल्यवान् समय नोक्सान हुन्छ। शरीर निर्वाहको लागि धन्दा आदि गर फेरि पनि हातले काम गर, मनले बाबालाई याद गर। बाबा भन्नुहुन्छ– मलाई याद गर्यौ भने राजाई तिमीलाई मिल्छ। खुदा दोस्तको कथा पनि सुनेका छौ नि। अल्लाह अवलदीनको पनि नाटक देखाउँछन्। छुने बित्तिकै खजाना निस्केर आयो। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ– अल्लाहले तिमीलाई छुने बित्तिकै के बाट के बनाउनु हुन्छ। तुरुन्तै दिव्य दृष्टिद्वारा वैकुण्ठ जान्छौ। पहिला बच्चीहरू आपसमा मिलेर बस्थे, अनि आफैं जान्थे ध्यानमा। फेरि जादु भनिदिन्थे। त्यसैले त्यो बन्द गरिदिएँ। यी सबै कुरा हुन् यतिबेलाका। हातमताईको कथा पनि छ। मुहलरा मुखमा राखे भने माया गुम हुन्थ्यो। मुहलरा निकाल्यो भने माया आउँथ्यो। रहस्य त कसैले पनि बुझ्दैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ– प्यारा बच्चाहरू मुखमा मुहलरा राखिदेऊ। तिमी शान्तिको सागर हौ, आत्मा शान्तिमा आफ्नो स्वधर्ममा रहन्छ। सत्ययुगमा पनि जानेका हुन्छन्– हामी आत्मा हौं। तर परमात्मा पितालाई कसैले पनि चिनेका हुँदैनन्। जब कसैले सोध्छन् भने– भन, त्यहाँ विकारको नामै हुँदैन। हो नै निर्विकारी दुनियाँ। ५ विकार त्यहाँ हुँदैन। देह-अभिमान नै हुँदैन। मायाको राज्यमा देह-अभिमानी बन्छन्, त्यहाँ त हुन्छन् नै मोहजित। यस पुरानो दुनियाँबाट नष्टोमोह हुनु छ। वैराग्य त उनीहरूलाई आउँछ जसले घरबार छोड्छन्। तिमीले त घरबार छोड्नु छैन। बाबाको यादमा रहेर यो पुरानो शरीर छोडेर जानु छ। सबैको हिसाब-किताब चुक्ता हुनु छ। फेरि जान्छौ घर। यो कल्प कल्प हुन्छ। तिम्रो बुद्धि अहिले टाढा-टाढा माथिसम्म पुग्छ, उनीहरूले हेर्छन् कहाँसम्म सागर छ? सूर्य-चन्द्रमामा के छ? पहिला यी देवता हुन् भन्ने सम्झन्थे। तिमीले भन्छौ– यी त मण्डपका बत्तीहरू हुन्। यहाँ खेल हुन्छ। त्यसैले यी बत्तीहरू पनि यहाँ छन्। मूलवतन, सूक्ष्मवतनमा यी हुँदैनन्। त्यहाँ खेल नै हुँदैन। यो अनादि खेल चल्दै आएको छ। चक्र घुमिरहन्छ, प्रलय हुँदैन। भारत त अविनाशी खण्ड हो। यसमा मनुष्य रहन्छन् नै, जलमग्न हुँदैन। पशु-पंक्षी आदि जति पनि छन्, सबै हुन्छन्। बाँकी जति पनि खण्ड छन्, ती सत्ययुग-त्रेतामा रहँदैनन्। तिमीले जे दिव्य दृष्टिद्वारा देखेका छौ, त्यो फेरि यथार्थमा देख्छौ। यथार्थमा तिमीले वैकुण्ठमा गएर राज्य गर्छौ। जसको लागि पुरुषार्थ गरिरहन्छौ, फेरि पनि बाबा भन्नुहुन्छ– यादमा धेरै मेहनत हुन्छ। मायाले याद गर्न दिँदैन। एकदम प्यारसँग बाबालाई याद गर्नु छ। अज्ञान कालमा पनि प्यारसँग पूर्वजको महिमा गर्छन्। हाम्रा फलाना यस्ता थिए, फलाना पदका थिए। अहिले तिम्रो बुद्धिमा सारा सृष्टि चक्र बसेको छ। सबै धर्मको ज्ञान छ। जसरी त्यहाँ आत्माहरूको वंशवृक्ष छ, यहाँ फेरि मनुष्य सृष्टिको वंशवृक्ष छ। ग्रेट-ग्रेट ग्रैण्ड फादर ब्रह्मा हुन्। फेरि हुन्छ तिम्रो पुस्ता। सृष्टि त चलिरहन्छ।
बाबाले सम्झाउनु हुन्छ– प्यारा बच्चाहरू! नरबाट नारायण बन्नु छ भने तिम्रो जे भनाइ छ, त्यही गराइ होस्। पहिला आफ्नो अवस्था हेर्नुपर्छ। बाबा मैले त हजुरसँग पूरा वर्सा लिएरै छोड्छु, त्यसैले त्यो चालचलन पनि हुनुपर्छ। यो एउटै पढाइ हो, नरबाट नारायण बन्ने। यो कुरा तिमीलाई बाबाले नै पढाउनु हुन्छ। राजाहरूका राजा तिमी नै बन्छौ, अरू कुनै खण्डमा हुँदैन। तिमी पवित्र राजा बन्छौ, फेरि पवित्रता (लाइट) बिनाका अपवित्र राजाहरूले पवित्र राजाहरूको मन्दिर बनाएर पूजा गर्छन्। अहिले तिमीले पढिरहेका छौ। विद्यार्थीले टिचरलाई कसरी बिर्सन्छन्! भन्छन् बाबा मायाले बिर्साइदिन्छ। दोष फेरि मायामाथि लगाउँछन्। अरे, याद त तिमीले गर्नु छ। मुख्य टिचर एउटै हुनुहुन्छ, बाँकी अरू सबै हुन् नायब टिचरहरू। बाबालाई बिर्सिन्छौ, ठीक छ, टिचरलाई याद गर। तिमीलाई ३ वटा अवसर दिइन्छ। एउटालाई बिर्से अर्कोलाई याद गर। अच्छा!
१) बाबासँग पूरा वर्सा लिनको लागि जुन भनाइ छ, त्यही अनुसार गराइ होस्। त्यसको लागि पुरुषार्थ गर्नु पर्छ। मोहजित बन्नु छ।
२) सदा याद रहोस्– हामी शान्तिका सागरका बच्चा हौं, हामी शान्त रहनु छ। मौनमा रहनु छ। व्यर्थमा आफ्नो समय गुमाउनु हुँदैन।
तड्पिइरहेका आत्माहरूलाई एक सेकेन्डमा गति-सद्गति दिने मास्टर दाता भव
जसरी स्थूल सिजनको तयारी गर्छौ, सेवाधारी, सामग्री सबै तयार गर्छौ जसले गर्दा कसैलाई कुनै कठिनाई नहोस्, समय व्यर्थ नजाओस्। त्यसरी नै अब सबै आत्माहरूको गति-सद्गति गर्ने अन्तिम सिजन आउनेवाला छ, तड्पिइरहेका आत्माहरूलाई क्यूमा उभिने कष्ट दिनु हुँदैन, आउँदै जाऊन् र लिदै जाऊन्, यसको लागि एभररेडी बन। पुरुषार्थी जीवनभन्दा माथि अब दातापनको स्थितिमा रहने गर। हरेक संकल्प, हरेक सेकेन्डमा मास्टर दाता बनेर चल।
हजुरलाई (बाबा) बुद्धिमा हाजिर (याद) राख्यौ भने सर्व प्राप्तिहरूले जी (हुन्छ) हजुर गर्नेछन्।